युएइको चौथों विकेट पतन, सन्दिपको नाममा २ विकेट ! – Everest Dainik – News from Nepal
युएइको चौथों विकेट पतन, सन्दिपको नाममा २ विकेट !
काठमाडौं, भदौ १४ । मलेसिया जारी एसिया कप छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपाल र युएइबीच भइरहेको खेलमा युएइको चौथो विकेट पतन भएको छ । चौथो विकेट सन्दिप लामिछानेले लिएका हुन् । आजको खेलमा उनको यो दोस्रो विकेट हो । पहिलो विकेटका रुपमा उनले रोहन मुस्ताफालाई आउट गरेका थिए ।
नेपालले आज टस जितेर फिल्डीङ रोजेको छ । यसैबीच, तेस्रो विकेट बसन्त रेग्मीले लगेका छन् । उनले रामीज सहाज्डलाई ३५ रनमा पवेलियन फर्काएका हुन् । बसन्तले यसअघि पहिलो विकेटका रुपमा विस्फोटक ब्याट्सम्यान आश्फीक अहेमदलाई आउट गरेका थिए ।